Ratchet Ku Xidh
Ku marooji Jack
qalabka isdaba -marinta
Ma taqaan afarta sababood ee ugu waaweyn ee dhaawac u geysta suunka qaadista
Wadhaf -dhaafku aad buu ugu badan yahay nolol -maalmeedkeenna, waxtarka adeegsigana aad buu u sarreeyaa. Waxaa badanaa lagu arkaa gaadiidka iyo qaadista walxaha culus, sidoo kale waxay ka ciyaaraan door muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, macmiil badan ayaa ogaan doona in wadhafka qaadista ay tahay in la beddelo ka dib muddo isticmaalka. , Markaa ...
Waa maxay mabda'a kor u qaadista silsiladda
Silsiladda silsiladda gacanta ayaa ku habboon kor-u-qaadista qalabka yar yar iyo alaabta. Miisaanka qaadista guud ahaan kama badna 10T, kan ugu weyna wuxuu gaari karaa 20T. Dhererka qaadista guud ahaan kama badna 6m. Qolofka dibedda ee silsiladda dhejiska waxaa laga sameeyey bir daawaha oo tayo sare leh, whi ...
Sababta silsiladda silsiladdu u simbiriirixan doonto
Miyaad xitaa la kulantay xaaladdan oo kale: inta lagu guda jiro hawsha adeegsiga kor -u -qaadista silsiladda, silsiladda silsiladdu waa simbiriirixan doontaa, dhab ahaantii, mid ka mid ah qodobbada ka dhigi doona silsiladda kor -u -qaadista silsiladda ayaa ah diskka isku -buuqa, markaa waa maxay sababta keenaysa isku -dhaca warqadda diskka? Marka xigta, waxaan kuu soo bandhigi doonaa sabab uun ...
Tilmaamaha iyo Taxaddarrada Isticmaalka Shaabbadda Webka
Suunka wadhafidda ayaa si weyn loogu isticmaalaa badda, batroolka, gaadiidka iyo warshadaha kale. Kaas oo leh miisaan fudud iyo dabacsanaan wanaagsan. Badeecadani waa mid aad iyo aad loogu jecel yahay dadka isticmaala waxayna si tartiib tartiib ah u beddeshay dharbaaxadii xarigga siligga dhinacyo badan. Si loo hubiyo cimri dhererka wadhafka, maxaa ...
Horudhaca aaladda badbaadada ee silsiladda korantada ee ASAKA HHBB
HHBB silsiladda korantada korantada waa silsilad koronto oo aad u kharash-badan oo ay soo saartay shirkadeena. Hoos waxaan ku siin doonaa hordhac faahfaahsan aaladda badbaadada ee kor -u -qaadkaan korontada: 1. Biriigga Baabuurka “Biriiga electromagnetic” waa naqshad bareega oo gaar ah. Dabeecadiisu waa in xitaa aad ...
Sida loola tacaalo xaaladaha degdegga ah ee kor u qaadista korontada
Si loola tacaalo shilalka qalabka gaarka ah ee barwaaqada ah ee degdega ah, qorshayaasha gurmadka ee soo socda ayaa la diyaariyey: 1. Markaad isticmaasho korantada mini korontada 200 kg oo ay jirto koronto si lama filaan ah, dadku waa in la abaabulo si ay u ilaaliyaan goobta, u taagaan calaamado mamnuucid agagaarka goobta shaqada, iyo sen ...
Hababka kormeerka caadiga ah ee kor u qaadista kabaalka
Waxaa jira saddex hab oo caadi ahaan loo adeegsado kormeerka kor u qaadista lever: kormeerka muuqaalka, kormeerka tijaabada, iyo kormeerka waxqabadka bareega. Hoos waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonnaa hababkan kormeerka mid mid: 1. Kormeer aragga 1. Dhammaan qeybaha kor -u -qaadista suunka waa in si wanaagsan loo soo saaraa, ...
Waa maxay sababta kor u qaadista korontadu aad muhiim u tahay?
Warshadaha qaadista waxay xiriir aad u weyn la leeyihiin wiishashka korontada. Mashruucyo badan ayaa adeegsan doona kor u qaadista korontada yar ee 500kg. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sababta soo ifbaxaya qalabkan kor u qaada korontada uu na siin karo caawimaad aad u weyn? Si kale haddii loo dhigo, saamayn intee le'eg ayay ku leedahay jiritaanka hoygan korontada ...
Sida Loo Adeegsado Xidhitaanka Ratchet
Xadhkaha xamuulka xamuulka ayaa kaalin weyn ka qaata gaadiidka, dhaqdhaqaaqa, rarida ama kaydinta alaabta. Ka dib marka la xiro, sheyga waa adag tahay inuu dhaco oo ka ilaaliyo shayga waxyeello. Shaqada ugu weyni waa in la adkeeyo. 1. Astaamaha qaabdhismeedka Xarigga ratchet -ku waa isku dar s ...
Faa'iidada ASAKA Ratchet Tie Down
1. Xadhkaha xamuulka ASAKA ee nabdoon oo ka sii adag ayaa dhalin kara ugu yaraan 2,000 rodol oo xoog jiidis ah, taasoo keenaysa suunka karbaashka xamuulka meel u dhow dusha sare ee shayga isku xidhaya ee qaababka kala duwan leh, taasoo ka dhigaysa mid ka sii xoog badan oo nabdoon. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay hagaajinta walxaha aan joogtada ahayn. 2. suunka xamuulka ayaa la sameeyaa ...
Arrimo u baahan fiiro gaar ah xagga hawlgalka Xadhigga Siligga Korontada
Arrimaha u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho hawlgalka xarigga siligga cd1 ee kor -u -qaadka korontada waa sida soo socota: 1.Xadhkaha siligga ee garbaha waa in loo habeeyo si habboon. Haddii ay is -dul -saaran yihiin ama la majaro -habaabinayo, waa in la joojiyaa oo dib -u -habayn lagu sameeyaa. Waxaa si adag loo mamnuucay in la jiido oo lagu tallaabsado t ...
Taxaddarrada doorashada Jack Dhalo
Markii aan dooranay jaakada dhalada hiddaha, waxaa jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la tixgeliyo, tusaale ahaan: 1, Waxaan u baahanahay inaan xaqiijino awoodda la qiimeeyay ee aan u baahan nahay, waxaan ku talinay inaan dooranno midka culeyska qaadista lagu qiimeeyay uu ka sarreeyo culeyska leh 20%. 2.Boqorka iyo istaroogga: Sida laga soo xigtay t ...
Ma taqaan afarta sababood ee ugu waaweyn ee keena dam ...
Tilmaamaha iyo Taxaddarrada Anaga ...
Hordhaca aaladda badbaadada ee ASAK ...
DHISMAHA WAQTIGA, JIDKA LIANGZHU, DEGMADA YUHANG, MAGAALADA HANGZHOU, GOBOLKA ZHEJIANG, CHINA
Naga Soo Wac Hadda: +86 13486165199